Muuri News Network » SAWIRO: Jaaliyadda Beesha Biimaal ee Dalka Sacudiga oo kullan soo dhaweyn ah u sameysay Masuuliyiin..
SAWIRO: Jaaliyadda Beesha Biimaal ee Dalka Sacudiga oo kullan soo dhaweyn ah u sameysay Masuuliyiin..
Jul 8, 2016 - Comments off
Jaaliyadda beesha Biimaal ee dalka Saudi Carabiya ayaa maanta waxa ay kullan soo dhaweyn ah u sameeyeen dhalinyaro safar booqasho ku soo gaartay dalka Sacuudi carabiya.
Waxaa kullankaas soo dhaweynta kaalinweyn ka qaatay soona qabanqaabiyay gudoomiyaha dhaliyarada ururka Dulmidiid Abdullahi Afyare iyo Xasan Cali Kenya oo ah nin aad u firfircoon had iyo jeerna ka dhexmuuqda howlaha Jaaliyadda Beesha Biimaal ee sucuudiga.
Waxaa kaloo kullanka goob joog ka ahaa kana qeybqaatay:-
1. Axmed Muraale
2. Maxamed Baakaay
3. Aweys Nuur
4. Rooble Xassan
5. Cabdullahi Yaraane
6. Cabduqaadir duuroow
Dhanka kale, martidii kullanka lagu soo dhaweenayay waxa ay kala ahaayeen:- 1. Cabdicasiis muxiyidiin xaaji ibraahim
2. Cabdullahi shiekh maxamuud
Waxa ayna kakala yimaadeen wadanka Kenya iyo Soomaaliya. Jaaliyadda iyo martida ayaa iska xog wareyatay arimo badan oo ka mid ahaayeen xaaladaha deegaanada beesha ka degto gobollada dalka soomaaliya; iyo sida lagu xalinkaro dhibaatooyinka jira.
Jaaliyadda sacuudiga ee Beesha Biimaal ayaa had iyo jeerba laga dareemaa firfircooni aad u ballaaran iyo waxqabad muuqda oo ay u muujiyaaan cid allaala cidii booqasho ku soo gaarto wadanka sacuudiga, waxaana lagu xusuustaa jaaliyadda sida ay ugarab istaageen shacabka sh/hoose xilligii dagaalada iyo abaaraha ay ku furnaayeen